Maamulka Koonfur Gabled oo Soo dhaweeyey Xayiraada laga qaaday Abuu Mansuur | SAHAN ONLINE
Maamulka Koonfur Gabled oo Soo dhaweeyey Xayiraada laga qaaday Abuu Mansuur
Ugaas Xasan Maxamed Cabdi
BAYDHABO – Maamulka Koonfur Galbeed ayaa soo dhaweeyey xayiraadii laga qaaday Shiikh Mukhtaar Roobow Abuu Mansuur,kaasoo looga saaray liiska argagaxisada caalamiga ee shaqsiyaadka loogu doon doonista badnaa.
Wasiirka Warfaafinta Maamulka Koonfur Galbeed Ugaas Xasan Maxamed Cabdi oo la hadlay Idaacada VOA ayaa sheegay in ay soo dhaweynayaan xayiraada laga qaaday Abuu Mansuur.
Sidoo kale waxa uu sheegay in horay Abuu Mansuur u sii daayay mas’uuliyiin ka tirsanaa dowladda ,sanado ka hor markii Al-Shabaab ay la wareegeen magaalada Baydhabo ee gobolka Baay.
Mukhtaar Roobow Abuu Mansuur ayaa la sheegay in wadahadalo aan toos ahayn uu u socday dowladda Soomaaliya ,waxaana afartii sano ee lasoo dhaafay ku sugnaa deegaanada howdka ah ee gobolka Bakool,waxaana ilaalinaya dagaalyahano beeshiisa ah.
Dawladda Federaalka Soomaaliya ayaan weli ka hadlin Xayiraada laga qaaday Abuu Mansuur oo ahaa kuxigeenkii Hoggaamiyihii hore ee Al-Shabaab Axmed Cabdi Godane oo sanadkii 2014 diyaaradaha dagaalka Maraykanka ay duqeyn ku dileen.